Indlu yangaphambili yolwandle entliziyweni yoNxweme oluPhezulu - I-Airbnb
Indlu yangaphambili yolwandle entliziyweni yoNxweme oluPhezulu
Wamkelekile kwigem encinci enoxolo kwaye ezolile apho unokonwabela ubuhle bendalo. Qala intsasa nganye ngokuhamba kwindlela yoNxweme oluPhezulu kwaye ugqibezele nge-BBQ kunye nokuntywila elwandle kunxweme lwangasese lwamatye okanye kunxweme olunesanti (imizuzu emi-5 ukuhamba). Izikhephe eziya e-Ulvön naseTrysunda zingaphaya nje kwebhayi. Uya kuba neyakho ikhowudi yokufikelela yabucala ukuze ukhangele ngaphakathi nangaphandle. Nceda uqhagamshelane nomninimzi ukuba ungaphezulu kwabantu abayi-6 ukukhusela amalungiselelo okulala.
Silandele kwi-Insta: @highcoasthouse.
Ikhaya leeholide lakhiwe ngo-2015 kuyilo lwaseScandinavia. Ubuhle bendalo kunye nokulula kuye kwaba yimixholo ephambili kuyilo zombini xa kuziwa ngaphakathi nangaphandle.
Indawo intle kakhulu, phambi kolwandle kwindawo yelifa lehlabathi eyaziwa ngokuba yindalo entle. Le ndawo izolile kwaye izolile kwaye kukho iindlwana ezimbalwa kunye nezindlu kule ndawo. Lo mhlaba unonxweme lwabucala (amatye). Ulwandle olukufutshane loluntu (isanti) luhambo lwemizuzu emi-5.
Njengababuki zindwendwe siya kufumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile ngexesha lokuhlala kwakho ukuze siphendule nayiphi na imibuzo.